YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, October 30
ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမဘေးရှိ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်လုံး
ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမဘေးရှိ ကားမှတ်တိုင်တွင် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ (ယနေ့ည) ၇ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ပြင်းထန်မှု မရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စဉ် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာ နေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်ဗုံးကို ထပ်မံရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော မျက်မြင်သက်သေ ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် ပြောကြားသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ပြင်းထန်မှု မရှိဘဲ ပေါက်ကွဲသံမှာလည်း မီးခံကြိုး (Fuse) ပြတ်သည့် အသံမျိုးသာ ကြားလိုက်ရကြောင်း၊ ယခုအခါ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာ အနီးအနားတစ်ဝိုက်နှင့် ဆူးလေအဝိုင်းကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထူထပ်စွာ ချထားပြီး မြို့တွင်း ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ်များ အပါအဝင် မည်သူ့ကိုမှ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မပြုတော့ကြောင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်လုံး ထပ်မံတွေ့ရှိသည့်သတင်းမှာ အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း အဆိုပါနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသော ဗုံးနှစ်လုံးအနက် ပထမအလုံးကို ည ၇ နာရီ ၂ မိနစ်တွင် လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအလုံးကို ည ၉ နာရီ ၄ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်။
BY YeYint Nge ... 10/30/2011 1 comment
၁၉၈၉ခုနှစ်က သံလျင်ရေနံချက်စက်ရုံး ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြင့် အစွပ်စွဲခံရပြီး သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ တောင်ငူထောင်မှ ကိုညီညီဦး
BY YeYint Nge ... 10/30/20110comment
ဦးဟန်ယောင်ဝေနှင့်သူ့သမီးအောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ မနက်ကပြန်လည်ထွက်ခွာ
အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေက Air Asia Flight နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ နော်ဝေအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (DVB) ရဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးအဖြစ် ယာယီတာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးဟန်ယောင်ဝေနှင့် သူ့သမီးတို့နှစ်ဦး အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ မနက် Air Asia Flight FD3771 လေယာဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားစဉ်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နာတာလီ ဂါဝါဟာ မနေ့ညနေ ၇ နာရီက လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးရက်ကြာခရီးစဉ်အဖြစ် အလည်အပက်ရောက်ရှိနေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နာတာလီ ဂါဝါဟာ မနေ့ညနေ ၇ နာရီက လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာအစိုးရသစ်ရဲ့ အာစီယံ ဥက္ကဌ အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနားလည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
နာတာလီဂါဝါအနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ကို ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ လက်ရှိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အတိုင်း ဆက်သွားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံအပြီး ည ၉ နာရီ ခွဲ ဆီဒိုးနားဟော်တယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
နာတာလီ ဂါဝါဟာ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတွေ အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့လည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။
နာတာလီ ဂါဝါအနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ အပါအ၀င် အခြား အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေသွားမှာဖြစ်သလို နိုဝင်ဘာလအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီမြို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မယ့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပဲမှာ တင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၁း၀၀ ကနေ ၁း၅၅ အထိ စိမ်းလဲ့ကန်သာ အစိုးရဧည့်ဂေဟာမှာ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်များ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် အတွက် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့် ရရှိရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ငွေကြေး လည်ပတ် သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေး၏ အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်ချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေများနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်သူများ ကိစ္စတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်
သရက်မြို့ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဦးကောဝိဒရဲ့ သိက္ခာတော်ထပ် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား
သရက်မြို့ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဦးကောဝိဒရဲ့ သိက္ခာတော်ထပ် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်က တက္ကသီလာ မဟာဇေယျာ သိဒ္ဓိပဌာန်း ကျောင်းတိုက်မှာ ဒီကနေ့မနက် ၉ နာရီက ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအလှူပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ် သံလွင်လမ်းက ရဟန်း မယ်တော်ကြီး ဒေါ်ခင်ရီနဲ့ ဒေါ်ဝင်းကြည် မိသားစုတို့က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဦးဝင်တင် နဲ့ အန်အယ်ဒီ လူမှုအထောက်ကူပြုအဖွဲ့မှ လူငယ်တာဝန်ခံ မဖြူဖြူသင်းတို့အပြင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က သူအတော်များများလည်း တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရဲ့ သံဃနာယက ဥက္ကဌဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဒ္ဒန္တဦးကောဝိဒဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့ ဇာတိသားဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးကောဝိဒဟာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် စစ်အစိုးရက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ် နဲ့ ၃ လ ချမှတ်ခဲ့တာပါ။
အခုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတယ် ဆိုပေမယ့် သူဟာ ထောင်ထဲမှာ ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်နဲ့ ၁လ နေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
BURMA NIGHT AT TORONTO'S DIASPORA FESTIVAL!!
Burmese Night at the 11th International Diaspora Film Festival
Saturday November 5th 2011 @ 7pm
In celebration of the first anniversary of the release of Aung San Suu Kyi, the Nobel Laureate leader of Burmese people for democracy, IDFF presents two North American screen debuts:, Lady of No Fear and Burmese Dreaming. This event is hosted by award winning author Karen Connelly, creator of two bestsellers “Lizard Cage” and “Burmese Lessons, A Love Story”. Canadian Campaign for Free (www.cc4fb.org) core members are actively participating in organizing the event.
Place: Innis Town Hall, Toronto, Ontario
Address:2Sussex (St. George & Sussex intersection; 1 block south of Bloor,
St. George subway station)
To reserve tickets please email info@diasporafilmfest.com (prefer)
Full film descriptions and schedule available on IDEF website www.diasporafilmfest.com
7 pm. “AUNG SAN SUU KYI: LADY OF NO FEAR”
First Canadian screening of Danish director Anne Gyrithe Bonne’s acclaimed documentary and 2011 nominee for the prestigious Cinema for Peace Award in Berlin.
The film charts Aung San Suu Kyi’s love story with Michael Aris; her unforgettable journey from Oxford housewife to political leader, international heroine and Nobel Laureate. Friends and relatives speak intimately about ASSK- the woman, friend, wife and mother faced with the heartrending choice between country and family. 58 minutes
8 pm. Burma Talk: hosted by award winning author Karen Connelly
8:30 pm. “BURMESE DREAMING” the story of Burma through the eyes ofaKaren child living inarefugee camp
A creative non-fiction documentary by Australian filmmaker and writer Timothy Syrota. Syrota usesaunique combination of film, art, photography, music and social and political commentary to tell the story of Burma through the eyes ofaKaren child living inarefugee camp on the Thai-Burma border. Based onatrue circumstance, Say Say La reflects on her life throughaseries of dreams and poetic flashbacks. The film alternates between scenes from the refugee camp and scenes from her childhood, before the Burmese military killed her father and kidnapped her at age five.
Syrota is known for his bestseller Welcome To Burma and Enjoy the Totalitarian Experience. 48 minutes
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည် ၄ ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံအပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
by Lu Cifer on Sunday, October 30, 2011 at 4:33am
၂၀၁၀ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားပဲ Rare Earth Elements ဒါမှမဟုတ် Rare Earth Minerals လို့ခေါ်တဲ့ ရှားပါးတွင်းထွက် သတ္တုတွေကို လူတွေ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း ဒီတွင်းထွက်တွေကို အဓိကထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့တင်ပို့မှု အားလုံးရဲ့ ၉၇%လောက်ကို နေရာယူထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မကြာခင်နှစ်တွေ အတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ တင်ပို့မှုကို လျှော့ချတာ တွေနဲ့ အတူ နိုင်ငံရေး ကစားတာတွေပါလုပ်လာခဲ့တာမို့ ဂျပန်နိုင်ငံလို REE ၆၀%လောက်ကို တရုတ်ဆီက ပုံမှန်ရယူ သုံးစွဲနေရသူတွေအဖို့ အခက်တွေ့ လာကြပါတယ်။
Earth removing works at Irrawaddy Dam Project
နောက်ဆုံးပေါ် smart phone ကအစ hybrid ကားကနေ ဒုံးပျံအထိ ကနေ့ခေတ်ရဲ့ လူနေမှုဘ၀အတွက် အဆင့်မြင့် နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှ ဟာ ဒီREE တွေကိုမှီခိုနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စက်မှုဖွံ့ ဖြိုးတဲ့ ဂျပန်တို့ တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာ ကမ္ဘာတလွှား REE ရှာပုံတော်ဖွင့်လာကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တောင်ကိုရီးယားက ဒီဇင်ဘာလမှာပဲ ရှားပါးသတ္တုရှာဖွေဖို့ လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘူမိဗေဒ လေ့လာစူးစမ်းရေး USGS အဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင် ဒီရှားပါးသတ္တု REEတွေဟာ Lanthanide လို့ခေါ်တဲ့ အုပ်စုထဲမှာရှိပြီး Periodic Table လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်တွေကို သူတို့ အက်တမ်အလေးဆ အတိုင်းစီထားတဲ့ ဇယားထဲက နံပါတ် ၅၇ ကနေ ၇၁ အတွင်းမှာရှိ နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တူညီတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတဲ့ နံပါတ် ၂၁ဖြစ်တဲ့ Scandium နဲ့ နံပါတ် ၃၉ ဖြစ်တဲ့ Yittrium တို့ကိုလည်း Lanthanide အုပ်စုထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဒီရှားပါး REE သတ္တုတွေကို ပေါ့တဲ့ အုပ်စုနဲ့ လေးတဲ့အုပ်စုအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်ပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ နံပါတ် ၃၉ Yittrium နဲ့ နံပါတ် ၆၄ ကနေ ၇၁ အတွင်းမှာရှိတဲ့ လေးတဲ့ ရှားပါးဒြပ်စင်တွေဟာ ပေါ့တဲ့ ဒြပ်စင်တွေလောက် များများစားစား တွေ့ရလေ့ မရှိပါဘူး။
ရှားပါးသတ္တုလို့ နံမယ်ပေးထားပေမယ့် တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ နေရာအနှံ့ တွေ့ရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တသန်းပုံပုံရင် ဆယ်ဂဏန်း ကနေ ရာဂဏန်းလောက်ပဲ အများဆုံးပါဝင်တတ်တာမို့ သူတို့ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ကိစ္စဟာ စီးပွါးရေးအရ တွက်ခြေသိပ်ကိုက်လေ့ မရှိပါဘူး။
ရှားပါးသတ္တုတွေ အတော်များများမှာ Yitrium ပါဝင်လေ့ရှိပြီး သူတို့ကို အယ်ကာလီကြွယ် တိုးဝင်မီးသင့်ကျောက်တွေ၊ ကာဗွန်နိတ်တွင်းထွက် ၅၀%ကျော် ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ ကာဗွန်နတိုက် တိုးဝင်မီးသင့်ကျောက်တွေနဲ့ အများဆုံးတွဲတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မိုးကုတ်ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသ မိုးမိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာ တွေ့နိုင် မယ့်အလားအလာရှိတယ်လို့ ဘူမိဗေဒပညာရှင် တွေကပြောပါတယ်။
ရှားပါးသတ္တုတွေက လူတွေကို တိုက်ရိုက် အန္တရာယ်ပေးတာမျိုး သိပ်မရှိပေမယ့် သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ရာမှာ ရလာတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓါတ်တွေ ပါဝင်နေတတ်တာမို့ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု ရေထုထဲရောက်မသွားစေဖို့ သိပ်ကို သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သတ္တုတူးဖေါ်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ထိခိုက်နိုင်မယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်တဲ့ Environmental Impact Accessment ကို နိုင်ငံတကာ စံနှုံးတွေအတို်င်းလုပ်ဆောင်စေဖို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်ပေးသင့် ပါတယ်။
သောကြာ, 28 ဇန်နဝါရီ 2011
(ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ Projects များနဲ့အတူ အရေးကြီးတဲ့ စဉ်းစားစရာ issue တခုမို့ Note အဖြစ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
BBC's ploblem article
5 November 2010 Last updated at 22:04 ET
Bleak outlook for Burma's ethnic groups
By Anna Jones BBC News
Many ethnic groups fear life will be worse, not better, after the polls
Few expect that Burma's elections on7November - the country's first in 20 years - will do much more than than secure the military's grip on power.
But there is growing concern that the junta will use the polls to strengthen control over the country's ethnic minorities.
The groups make up 40% of Burma's population. They have been demanding - without success - greater regional autonomy from the majority Burman-led central government since independence from Britain in 1948.
Many have suffered persecution at the hands of the government, with widespread reports of forced labour, torture, village destruction and executions.
Some have reached ceasefire agreements with the authorities, but others are engaged in conflict with Burmese troops.
Tomas Ojea Quintana, the UN's Special Rapporteur for Burma, says the government should be investigated for possible crimes against humanity over its treatment of ethnic minorities.
He also says it must engage in "meaningful dialogue" with them if the elections are to be credible.
Failure to do so, others warn, could lead to an escalation of conflict. But the generals in Nay Pyi Taw do not appear to be listening.
Hundreds of thousands of ethnic voters will be unable to take part in the polls, either because they have been displaced or because in areas deemed too volatile, polling will not take place at all.
Some of the groups are boycotting the polls, echoing the stance of the now-defunct main opposition group, the National League for Democracy (NLD).
The Arakan Rohingya National Organisation (Arno), representing one of Burma's most persecuted minorities, said no credible election could be held under the "strange and undemocratic constitution".
But some 35 ethnic minority parties have nonetheless been approved to run.
Critics say many are little more than proxy parties for the military - the only party representing the Kachin minority in Kachin state, for example, is the Unity and Democracy Party of Kachin State (UDPKS), formed by members of the mass junta-support organisation, the Union Solidarity and Development Association (USDA).
Those genuine ethnic parties that are running say they are doing so with little optimism but in the hope that participation will, in the long run, bring benefits.
"The government has announced that it will hold free and fair elections and we believe and expect this," Sai Ai Pao, leader of the Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) told AFP news agency.
"I cannot guarantee it will completely happen. We just hope, that's why we are planning to participate," he said.
Other parties say they have no choice but to stand up and attempt to be counted.
"We, ethnic Chin groups that are very poor, must not waste this advantage," Pu No Than Kap,amember of Chin Progressive Party (CPP), told Mizzima news agency.
"It is also certain that the advantage will not be fully granted and the polls will not be free and fair at all. But we should not fail to seize this advantage."
Power centralised The government has, however, cancelled elections entirely in five key ethnic areas.
The security situation in Kachin, Kayah, Kayin, Mon and Shan states was such that the elections could not be "free and fair", it said in September.
In Shan state, some 17,000 villages will not hold polls, nearly 3,000 villages in Kachin state are affected and nearly 50% of Karen state will have no elections, the Alternative Asean Network (Altasean) reports, disenfranchising an estimated 1.5 million voters in ethnic areas.
Who votes and who does not may in the end have little relevance.
Even if representatives of ethnic groups do secure seats in parliament, they would be far short of the numbers needed to effect legislative or constitutional change.
Moreover, the national government can overrule state-level decisions and the president retains the power to appoint the most senior posts in each state.
It can also declareastate of emergency in any areas where "national solidarity" is deemed to be at risk.
This, say critics, will be used as an excuse to crush ethnic groups whose fighters have not put down their arms.
These armies, many of which have been fighting the government on and off for 60 years, are coming under intense - sometimes brutal - pressure from the government to transform themselves intoasingle Border Guards Force, under central control.
But the armies say they playavital role in protecting civilians. They anticipateamajor military crackdown after the election.
One member of the Mon National Democratic Front (MNDF) told the BBC earlier this year: "Not only will the election not help in solving all the problems but also it will be the start of more problems.
"This election can be the beginning of the greater revolution I'm afraid. I don't want more violence in Myanmar (Burma)."
Even before the polls took place, there were reports ofamajor armed stand-off between Burmese troops and the popular Kachin Independence Organisation (KIO).
In preparation for conflict, several armies are forming alliances - promising their support if one is attacked. There are suggestions that suchaunited front could ultimately strengthen the ethnic cause.
"We now have no real option but to unite, politically and militarily," AFP quoted Kachin spokesman Lahpai Nawdin as saying.
Death sentence Whether or not violence breaks out, many believe Burma's ethnic groups will suffer further post-election.
Many Burmese voters across the country will be casting their ballots for the first time
Zipporah Sein, general secretary of the Karen National Union (KNU) said the constitution that paved the way for the polls set in place "a death sentence for ethnic diversity in Burma".
"We will be given no right to practice our custom, to speak and teach our languages," Ms Sein told the Irrawaddy newspaper.
"The process of Burmanisation that has already been going on for decades will be accelerated."
Aid agencies and opposition groups agree that unless the needs of Burma's ethnic minorities are addressed and they are fairly represented, there can be no progress in the country.
Mark Farmaner of UK-based charity Burma Campaign, describes failure to grant ethnic groups greater autonomy as "the root cause of the instability in Burma".
"These elections don't come close to addressing that," he said. "In fact, they areastep in the opposition direction."
UPDATE 28 October 2011: The map in this article was temporarily removed on 27 October 2011 to make some changes. It has now been replaced with an updated version which includesasection on the Rakhine people.
Indonesia Foreign Minister meets Aung San Suu Kyi (Q&A)
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမတွင် ယနေ့ည အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ည ၇ နာရီခန့်က ပေါက်ကွဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် စတုတ္ထအကြိမ်တွေ့ဆုံ
မျိုးသိဏ်း | တနင်္ဂနွေနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၈ မိနစ်
(မဇ္ဈိမ) ။ ။ အစိုးရသစ်လက်ထက် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်တွေဆုံမှုအဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက စိမ်းလဲ့ကန်သာ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ရာ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုအပြီး ရန်ကုန်မြို့စိမ်းလဲ့ကန်သာ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ အတွင်းမှ ထွက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ကို အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ-မဇ္ဈိမ)
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် ဖတ်ကြားသည့် နှစ်ဘက်ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များနှင့် ပြန်လည် ဖြေကြားချက်များကို မဇ္ဈိမ စာဖတ်သူများကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် - “ကျနော့်အနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဦးစွာဖတ်ပြပါမယ်။”
“ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စိမ်းလဲကန်သာ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်ေ အာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁၃း၀၀ နာရီမှ ၁၃း၅၅ နာရီအထိ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအပေါ် နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်များ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်အတွက် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေးတို့၏ အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်ခြင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများ၊ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေများနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်သူများ ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။”
မေး - ဦးအောင်လှထွန်း (ရိုက်တာ) ။ ။ မမစုကို မေးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ နည်းနည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ မကြာသေးခင်က တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့လွှတ်ပေးတာ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးတယ်၊ ဆန္ဒပြခွင့်ပေးတယ်၊ နောက်ဆုံးကတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပေါ့။ ဒီဥစ္စာတွေက အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ပါသလား။
ဖြေ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမတို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိစ္စက ဒီဥပဒေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေ အတည်ပြု့ပီးတော့ ထွက်လာတဲ့အထိ စောင့်ပြီးမှ ပြောနိုင်မယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီဥပဒေ ထွက်လာပြီဆိုရင် အစည်းအဝေးခေါ်ရမှာပေါ့။ ကျမတို့ ပါတီစည်းကမ်းအရ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရပါလိမ့်မယ်။
မေး - ဦးအောင်လှထွန်း (ရိုက်တာ) ။ ။ ဥပဒေပါအကြောင်း အဓိကသုံးချက်က သိထားပြီးပါပြီ။ အန်အယ်လ်ဒီက ဥပဒေပညာရှင်တချို့လဲ သိထားပြီးပြီ ထင်ပါတယ်။
ဖြေ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့က တိကျတယ်လေ။ ဥပဒေကို ကြည့်ပြီးမှ ပြောနိုင်မှာပါ။ မကြည့်ရသေးပဲ၊ ကျမ မမြင်ရသေးပဲ မပြောနိုင်ပါဘူး။
မေး - ဦးတင်မောင်အေး (အဆာဟိရှင်ဘွန်း) ။ ။ ကျနော်တို့ဒီမှာ ဝန်ကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့တာ လေးခါရှိပါပြီ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတွေကို အများအားဖြင့် သိရပါတယ်။ အဲ့တာ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုပေါ့နော် နည်းနည်းအသေးစိတ်လေး ပြောလို့ရမယ်ဆိုရင် ပြောပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဖြေ - ဦးအောင်ကြည် ။ ။ ကျနော်တို့ သြဂတ်စ်တုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကလေး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေသာမက နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ ကျနော်တို့ သဘောတူညီထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥစ္စာ တော်တော်လေး ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ အဖြေဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကို အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့စိမ်းလဲ့ကန်သာ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့မြင်ရစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ-မဇ္ဈိမ) အစိုးရသစ်လက်ထက် လေးကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့မှုတွင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် စသည့် အရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေး - ကျော်စွာမင်း (ရန်ကုန်တိုင်းမ်စ်) ။ ။ အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဆက်လက်လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စ၊ နောက်တခါ အန်တီစုနဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တာရော ရှိပါသလားခင်ဗျ။
ဖြေ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမတို့ ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ အမြဲတမ်းလဲ ကျမတို့ တွေ့တိုင်းလဲ ဒီကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါကျမတို့ ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ မို့လို့ပါ။
မေး - ဒေါ်အေးအေးဝင်း (အေပီ) ။ ။ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သတ်တယ်ဆိုတာ ဘာများလဲဆိုတာ နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပေးပါလား။ IMF နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆွေးနွေးတာမျိုးလား။
ဖြေ - ဦးအောင်ကြည် ။ ။ ခုန ဒီအထဲမှာ ကျနော်တို့ ပါသွားပြီးပါပြီ။ တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံလဲ ပါသွားပြီးပါပြီ။ သေသေချာချာလေး ဖတ်ကြည့်ရင် ခင်ဗျားတို့ တွေ့မှာပါ။ ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရေးကြီးမှုဆိုတာကတော့ အများကြီးပါပါတယ်။
မေး (သတင်းထောက်တဦး) - နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ဆက်လွှတ်ဖို့ ရှိပါသေးလားခင်ဗျ။ မကြာခင်ပေါ့။
ဖြေ - ဦးအောင်ကြည် ။ ။ လုပ်ငန်းစဉ် တရပ်ကို လုပ်တဲ့ အခါမှ ကျနော်တို့ တလှမ်းပီး တလှမ်း ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ သဘာဝ ရှိပါတယ်။ ဒါ အားလုံးလဲသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့က စုံလဲ မခုန်ပါဘူး။ ရပ်လဲ မနေပါဘူး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လေးကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ်္မတ မြန်မာနိုင်တော်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တို့သည် စိမ်းလဲကန်သာ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင်
အောင်တို့ဘာ ၃၀ရက်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့သည် မွန်းလွဲတစ်နာရီမှ
၁နာရီ ၅၅ ထိ တွေဆုံခဲ့သည်။ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအပေါ် နိုင်ငံတော်ညီဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ပေးနေသည့်အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အတွက် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာငွေကြေး လည်ပတ်သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေး တို့ အရေးကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေ
များနင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
များကို ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ နှစ်ဦးသဘောဆောင်ရွက်တိုးတက်မှုတွေကို မကြာသေး
ခင်က သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးတာ၊ လေဘာယူနီယံ
ကို မှတ်ပုံတင် ထိုးပေးတာ၊ ဆန္ဒပြခွင့်ပေးတယ်၊ နောက်ဆုံးကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ
လွှတ်ပေးတာ ဒါတွေက ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လိုအပ်ချက်များရှိပါသေးလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်- ကျမတို့ကဒီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စဟာ ဥပဒေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအတည်ပြုပြီး ထွက်လာတဲ့ အထိစောင့်ပြီးမှ ပြောနိုင်မယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က ဥပဒေကအထက်မှာ မရှိဘူးဆိုရင် အစည်းအဝေးခေါ်ရမယ်။ ပါတီရဲ့အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်
ချက်ကို ယူကြမယ်။ ကျမတို့က တိကျတယ်လေ။ ဥပဒေကို မကြည့်ရ သေးဘူး။ကျမ မမြင်ရသေးလို့မပြောသေးတာပါ။
ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့တာလေးကြိမ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ အဲတော့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ တွေကို အများအားဖြင့်သိရပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေမှာ
ဘယ်လိုပေ့ါ အသေးစိတ်ပြောလို့ရတာရှိပါသလား။ ပြောလို့ ရရင် ပြောပေးပါ။
ဦးအောင်ကြည်- ကျွန်တော်တို့ သြဂုတ်လတုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လေး
ရှိပါတယ်။ အဲထဲမှာ ကျွန်တော် တို့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သာမက
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပူပေါင်း ဆောင်ရွက် ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တော်တော်လေး ပြည့်စုံ လုံလောက်
တဲ့ အဖြေဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဦးအောင်လှထွန်းမေးတဲ့မေးခွန်း နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းလေးပါ။တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ကိစ္စအတွက်ရယ်။ နောက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသာေးတွဆက်လက်လွှတ်ပေးရေးကိစ္စ နောက်တစ်ခါ အန်တီစုအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမတကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တာများရှိပါ
ကျမတို့ ဒီကိစ္စတွေကို အားလုံးခြုံပြီးရှင်းလင်းပါတယ်။ အမြဲပဲတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုဆွေး
နွေးရှင်းလင်းပါတယ်။ ။ ပူပေါင်းဆောက်ရွက်တဲ့ကိစ္စ၊ ဆက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ စကားပြော
သဘာဝရှိပါတယ်။ အားလုံးလဲ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့စုံလဲမခုန်ဘူး၊ ရပ်လဲရပ်
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီးလျှင် NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး စဉ်းစားမည် ဟုဆို
by The Voice Weekly on Sunday, October 30, 2011 at 6:13am
ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၃၀
အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပြင်ဆင် အတည်ပြုပြီးလျှင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ ထပ်မံ မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
အရပ်သားအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာ၌ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက တစ်နာရီနီးပါးခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သော တွေ့ဆုံမှုအပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က " ကျွန်မတို့ ဒီ NLD ပါတီ ပြန်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စဟာ ဥပဒေပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဥပဒေ အတည်ပြုပြီး ထွက်လာတဲ့အထိ ကျွန်မတို့ စောင့်ပြီးမှ ပြောနိုင်မဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒီဥပဒေ ထွက်လာပြီဆိုရင် ပါတီ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအရ အစည်းအဝေး ခေါ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့က တိကျတယ်လေ။ ဥပဒေကို ကြည့်ပြီးမှ ပြောတယ်။ မကြည့်ရသေးလို့၊ ကျွန်မမမြင်ရသေးလို့ မပြောသေးတာပါ" ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လဆန်းတွင် ယခင်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပါ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက အမျိုးသား လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုချက် တင်သွင်းခဲ့ရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အား တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင် လာနိုင်စေရန် ဖြေလျှော့မှု တစ်ခု ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့က မှတ်ချက်ပြုသည်။
၁၉၈၉ခုနှစ်က သံလျင်ရေနံချက်စက်ရုံး ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြ...
ဦးဟန်ယောင်ဝေနှင့်သူ့သမီးအောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ မနက်...
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နာတာလီ ဂါဝါဟာ ...
သရက်မြို့ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဆရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည် ၄ ကြိမ်မြောက်ေ...
Indonesia Foreign Minister meets Aung San Suu Kyi ...
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမတွင် ယနေ့ည အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် စတုတ္ထအ...